Roulette kwi-intanethi yekhasino, yaseYurophu naseMelika
I-100% ukuya kwi-2000 PLN + 200 FS
URoulette ngumfanekiso wokungcakaza kunye nokumkanikazi wemidlalo kwihlabathi liphela. Ukuza kuthi ga namhlanje, xa singena ekhasino, sinokuva isandi sokuphosa ibhola, esiwa kwindawo ethile yesondo elijikelezayo, sinika abo baphumeleleyo kwaye sosule iinyembezi zokugqibela kunye nemali kwiipali zabalahlekileyo.
okuphumelela ngomnye wemidlalo yakudala yokungcakaza. Inguqulelo yayo yokuqala yenziwa kwi-1645. Kwakuy roulette nje. Iindidi ezimbini zeroulette kufuneka zikhankanywe apha - iinkqubo zaseYurophu naseMelika. Inguqulelo yaseMelika yaqanjwa ngenkulungwane ye-19 (emva kokuba i-1842 eyongezelelweyo yongezwa kwi-roulette kwi-0 kwaye inkqubo yabizwa ngokuba roulette yaseYurophu).
Yahluke njani i-Yuropu kwinguqulelo yaseMelika? Kwi-roulette yaseMelika, abadlali kunye nekhasino inomhlaba omnye abanawo-intsimi ye-00 yongeziwe. Oku kunxulunyaniswa neebhonasi ezininzi kunye nemithetho, ngenxa yethu esinokuthi sandise ukuphumelela okanye sandise ukoyiswa. Iingcali zikaRoulette, nangona kunjalo, zithi inguqulelo yaseMelika inzima kakhulu kwaye yadalelwa ukukhusela kuphela nabaqhubi Phambi komdlalo obukekayo wabadlali. Ukuphumelela kokuphumelela ngenkundla eyongezelelweyo kunye nemithetho Roulette yaseMelika incinci kakhulu kunenkqubo yaseYurophu- kungoko abadlali abanobuchule ababala kuphela kwimali enkulu besiya kwiRoulette yaseYurophu (eyathi, ngendlela, kwi1842 nayo yenziwa ukukhusela izindlu zokungcakaza, i.e.eekhompyuter, ekuwineni).
Ubonakala njani umdlalo?
Abadlali bame kwitafile enkulu enamanani kunye nevili elikhulu. Xa iibhetshi ezamkelweyo zihleli (ukubheja kwamkelwe ngumthengisi, onoxanduva lokubeka ivili ngokuhamba), umthengisi uqala ukusebenza. Kuqala, ivili liyajikeleza ukuze likhuphe ibhola encinci emva kwalo okwethutyana. Ibhola ijikeleza kwelinye icala eliya kwivili, kwaye emva koko ikhutshiwe iwela kwelinye lamacandelo amaninzi. Amabala amele inani kunye nemibala. Umdlali angabheja uluhlu lweenombolo, inani elichanekileyo (elinobungozi kakhulu) okanye umbala. Yeyona mibala ihlala ikhethwe ngabadlali-emva kwayo yonke loo nto, sinomlinganiselo we-50: 50. Ukuphambuka kuphela kukuzoba kwentsimi ye0, xa imbiza igcinwa yikhasino kude kube ngumjikelo olandelayo.
Zininzi iinkqubo zemidlalo ye-roulette. Eyona miyalelo idumileyo yokutyala imali encinci kunye nokuphindaphinda okucwangcisiweyo kokubheja, ukubheja kumbala omnye kuphela. Ezinye izicwangciso zifuna ukuba ubhejo kuphela kuluhlu lweenombolo ezithile. Oku kuyasebenza, kodwa kufuna umdlali ukuba aququzelele umdlalo rhoqo. Impazamo enye yanele ukuphulukana nesixa esikhulu.